AHOANA NO FOMBA AHAFAHANA MAMPIASA UPNP AMIN'NY ROUTER - NY ROUTER - 2019
Tena Ny router
Ampidiro UPnP amin'ny router
Amin'ny fampiasana router, indraindray ny mpampiasa dia manana olana amin'ny fidirana amin'ny rakitra filalaovana, lalao an-tserasera, ICQ ary loharano hafa malaza. Ity olana ity dia azo vahana amin'ny fampiasana UPnP (Universal Plug and Play) - serivisy manokana ho an'ny fikarohana mivantana sy fifandraisana, ary ny fametrahana ny fitaovana rehetra ao amin'ny tambajotra ao an-toerana. Raha ny marina, ity serivisy ity dia fomba iray hafa amin'ny fanodinana ny seranan-tsambo amin'ny router. Ilaina ihany ny mamela ny UPnP miasa amin'ny router sy ny solosaina. Ahoana ny fomba hanaovana izany?
Raha tsy te-hividy ports manokatra varavarana ho an'ny serivisy samihafa amin'ny router ianao dia afaka manandrana UPnP. Ity teknôlôjia ity dia manana tombontsoa roa (mora ampiasaina, tahan'ny fifanakalozana ambony) sy ny tsy fahampiana (tsy fahampian'ny rafitra fiarovana). Noho izany, manatòna ny fampidirana ny UPnP amin'ny fomba fijery sy am-pahatsorana.
Mba hahafahana mampiasa ny UPnP amin'ny router, dia mila miditra ao amin'ny aterineto ianao ary manamboatra ny fanovana ny router. Mora ny manamboatra azy io ary mety ho tompon'andraikitra amin'ny fitaovana enti-manerantany. Ohatra, eritrereto ity fandidiana ity amin'ny router TP-Link. Amin'ny rantsana marika hafa dia mitovy ny algorithm amin'ny hetsika.
Amin'ny tranokala Internet rehetra, midira ny adiresy IP an'ny router ao amin'ny adiresy bar. Amin'ny ankapobeny dia voasoratra ao amin'ny labozia ao ambadiky ny fitaovana. Matetika ny adiresy no ampiasaina matetika.192.168.0.1ary192.168.1.1, ary tsindrio ny lakile Ampidiro.
Ao amin'ny varavaram-pahaizana authentication, dia sokajy ny saha sahaza ny anarana sy ny tenimiao manan-kery mba hahazoana miditra aterineto. Ao amin'ny sehatry ny famolavolana, ireo sanda ireo dia mitovy:Admin. Dia kitiho ny bokotra «OK».
Indray mandeha eo amin'ny pejin-tranonkalan'ny tranonkalan'ny router misy anao, mivezivezy eo amin'ny tablette voalohany "Fomba fanitarana"izay hahitantsika ireo paikady ilaintsika.
Ao anatin'ilay fanalahidin'ny fanavaozana ny router hitady sehatra. "NAT Forwarding" ary mankanesa any aminy mba hanova ny fomba fametrahana ny router.
Ao amin'ny sub-menu izay miseho dia ahitantsika ny anaran'ilay paramèty ilaintsika. Tsindrio havia eo amin'ilay tsipika «UPnP».
Atsofohy eo amin'ny sary ny tsindry «UPnP» marina ary ampidino io endri-javatra io eo amin'ny router. Nataon'i! Raha ilaina, amin'ny fotoana rehetra dia azonao atao ny mamadika ny Fitaovana UPnP eo amin'ny router anao amin'ny alàlan'ny fandefasana ny tsindry havia.
Alefaso UPnP amin'ny ordinatera
Nisongadinay ny fametrahana ny router ary ankehitriny dia mila mampiasa ny tolotra UPnP amin'ny PC mifandray amin'ny tambajotra ao an-toerana izahay. Ho ohatra tsara, andao haka PC miaraka amin'i Windows 8 ao anaty bara. Amin'ny dikan-teny hafa amin'ny rafitra fampiharana mahazatra indrindra dia mitovy ny fahasamihafana misy eo amintsika.
Kitiho ny bokotra "Atombohy" ary ao amin'ny menu context izay misafidy, sokafy ny tsanganana "Control Panel"aiza ary mifindra.
Avy eo, mandehana any amin'ny tranokala "Network and Internet"izay liana amin'ny toe-javatra.
Ao amin'ny pejy "Network and Internet" tsindrio ny fizarana "Ivontoeran'ny tranonkala sy ny serasera".
Ao amin'ny varavarankely manaraka, kitiho ny tsipika "Manova safidy fifampizarana misimisy kokoa". Efa saika ny tanjona izahay.
Ao amin'ny toetra amam-pirazanana amin'izao fotoana izao dia ahafahantsika mahita ny tambajotram-pifandraisana sy ny fametrahana automatique amin'ny fitaovan'ny fitaovana. Mba hanaovana izany, mametraka kofehy amin'ny saha mifanentana. Tsindrio ny sary "Mahaiza miova", atsangano ny ordinatera ary ampiasao ny UPnP teknolojia ho feno.
Eo am-pamaranana, mandinika ny tsipiriany iray manan-danja. Amin'ny programa sasany, toy ny uTorrent, ianao koa dia mila manamboatra ny fampiasana UPnP. Mety hamarinina tsara anefa ny ezaka ataonao. Mandehana àry! Tsara vintana!
Jereo koa: Portio misokatra amin'ny router TP-Link
https://termotools.com mg.termotools.com © Ny router 2019